प्रधानमन्त्रीले महेश बस्नेतलाई किन मन्त्री बनाएनन् ? यस्तो छ बस्नेतको जवाफ Canada Nepal
प्रधानमन्त्रीले महेश बस्नेतलाई किन मन्त्री बनाएनन् ? यस्तो छ बस्नेतको जवाफ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका नेता महेश बस्नेतलाई गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मध्ये एक वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने चर्चा थियो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउने चर्चा थियो ।
साथै गृह नभए सञ्चार मन्त्री बनाउने चर्चा भए पनि बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको उनको नाम परेन । तत् पश्चात सामाजिक सञ्जालमा यसबारे धेरैले चासो र जिज्ञासा राखे ।
यसपछि बिहीबार साँझ नेता महेश बस्नेतले यसबारे जवाफ दिँदै फेसबुकमा लेखेका छन् :
मेरो राजनैतिक जीवनमा पद प्राप्ति ठुलो बिषय कहिले बनेन्। पार्टी निति , नेतृव र निर्देसन सदैब पालना गरेर अगाडि बडेको छु। परिभाषित काममा सदैब आफ्नो दक्षता देखाएको छु।
पार्टी भित्र मात्र होइन बाहिरका मान्छेलाई समेत प्रभाब र दबाब पर्ने गरी काम गरेको छु। अफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुरमा आम जनताको र देशभर को एमाले कर्यकर्ता र युवा पंक्तिको मन जितेरै बसेको छु। पटक पटकको मन्त्री मण्डलको पुनर्गठनमा मेरो नाम ब्यापक चर्चा हुने गर्दछ्।
मेरो सहयोद्धा कमरेडहरु बनाउने पक्षमा र बनाउनै हुदैन भन्ने पक्षमा ब्यापक लाग्नु हुन्छ्। हो।मेरो सफलतामा आफ्नो भलो र कोही आफ्नो राजकाज सकिन्छ भन ठान्छन । मेरो बिरोधि साथीहरुलाइ झन धेरै धन्यवाद छ ।जस्को कारण म हरेक पलमा सचेत भएर कदम चाल्दछु।त्यो नै महिले सिकेको सिकाई हो र उपलब्धि पनि!
कतिपय मिडियाले मेरो नाम जोडेर म आक्रोसमा छु। गुटफेर्दैछु जस्ता समाचार लेखिरहेका छन्। तेस्तो भ्रममा नपरौ म जहाँछु तेही छु र म जे छु तेही छु। अझै जोस जाँगर र उर्जाका साथ लाग्नेछु। मेरो राजनैतिक जीवनमा बिकाश गर्न खोजेको नयाँ अभ्यास समय क्रममा थप पुष्टी हुनेछ्।
जेठ २७, २०७८ बिहिवार १७:१३:२५ बजे : प्रकाशित